Metro surfer tsy voafetra fanalahidy sy ny vola madinika | HacksDirect
Metro surfer tsy manam-petra sy ny vola madinika manan-danja dia ny fitaovana Hack ho anareo raha mafana fo Subway surfer. ankehitriny, izany Hack hanatsarana ny toetra sy ny zavatra rehetra te hividy nefa tsy manahy momba ny na inona na inona. Ny fitaovana tsy ampy amin'ny rakitra Misy video iray ka mahazo ny tanana io mba hanana rakitra sy ny vola madinika voafetra fanalahidy.
Metro surfer dia nilalao ny maro ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Raha toa ianao ka tia ny lalao te-ho teo an-tampon'ny lisitry ny lalao dia izao no hanambaka ho anao. Amin'ny vola madinika ao amin'ny lalao, ny mpilalao fototra azo upgraded hanao tsara kokoa ary mahazo ny isa bebe kokoa.
Nahazo vola madinika na izany aza ny lalana dia lalana tsy tapaka lava loatra, ary dia azonao atao ny miakatra tohatra ny isa avo haingana kokoa ny mikapoka ny namanao na ny firaketana an-tsoratra teo aloha. Ny metro surfer mangalatra vola tsy voafetra mamela anao hahazo vola madinika voafetra. Tsy misy fanadihadiana taratasim-bola, ity no tsotra indrindra fitaovana hanambaka anao dia mampiasa raha ampitahaina amin 'ireo fitaovana hafa hita ao amin'ny aterineto.